LUNGISA I-APC_INDEX_MISMATCH IKHODI YOKUMA 0X00000001 KU-WINDOWS 10 - I-WINDOWS 10
Lungisa i-APC_INDEX_MISMATCH ikhodi yokuma 0x00000001 ku-Windows 10
Ukuqala kabusha kweWindows njalo nge, APC_INDEX_MISMATCH STOP 0x00000001 Iphutha Lesikrini Esibhakabhaka Ekuqaliseni? Le BSOD yenzeka kakhulu ngenxa yesishayeli segrafikhi esingahambelani, okuthile okungahambi kahle ngomshayeli we-Display njengamanje. Futhi, Izikhathi ezithile amafayela wesistimu onakalisiwe, ukutheleleka ngegciwane, iphutha leDisk Drayivu njll futhi kubangela i-APC_INDEX_MISMATCH Blue Screen Error.
Okuqukethwe umbukiso 1 I-APC_INDEX_MISMATCH Windows 10 1.1 Faka iwindows update 1.2 Qalisa kumodi ephephile 1.3 Buyekeza Abashayeli Abafakiwe 1.4 Khubaza Isici sokuqalisa esisheshayo 1.5 Lungisa amafayela wesistimu okonakele 1.6 Bheka iDisk Disk Corruption 1.7 Thuthukisa Futhi uhlole ukutheleleka ngegciwane
I-APC_INDEX_MISMATCH Windows 10
Uma futhi uthola iphutha lephutha lesibhakabhaka APC_INDEX_MISMATCH Ikhodi ye-BSOD Stop 0x00000001 Ekuqaleni. Lapha sinezisombululo ezisebenzayo zokuqeda lokhu. Okokuqala Susa onke amadivayisi angaphandle (iphrinta, iSkena, i-HDD yangaphandle, i-USB) bese uzama ukuqala amawindi ngokujwayelekile. Uma iqalwe ngokujwayelekile noma iyiphi idivayisi yangaphandle edala inkinga, namathisela amadivayisi ngamunye ukuthola idivayisi enenkinga.
i-itunes ayikwazanga ukuxhuma kule iphone iphutha elingaziwa livelile
Faka iwindows update
Qiniseka ukuthi ufake izibuyekezo zakamuva zeWindows kwikhompyutha yakho. Muva nje iMicrosoft ikhiphe isibuyekezo esisha esiqoqekayo se-KB5001567 ngokulungiswa kwe-Blue Screen of Death “APC_INDEX_MISMATCH” namaphutha we- “win32kfull.sys”.
Ikhuluma ngendaba engadala isikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka lapho izama ukuphrinta kumaphrinta athile isebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza futhi ingahle idale iphutha, APC_INDEX_MISMATCH. Umthombo microsoft
Qalisa kumodi ephephile
Ngenxa yephutha lesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka, ungahle ungaqali ukungena kusistimu yakho ngokujwayelekile. Uma kunjalo, sicela uvule ikhompyutha yakho Imodi ephephile nge-Networking Ukufinyelela windows desktop bese wenza izinyathelo ezingezansi. Uma ngemuva kokuthi i-Restart windows iqale ngokujwayelekile lapho-ke ungafaka ngqo izixazululo ze-bellow ukugwema APC_INDEX_MISMATCH Iphutha Lesikrini Esiluhlaza.
Buyekeza Abashayeli Abafakiwe
Njengoba kuxoxiwe okungahambisani ne-Graphics Driver ikakhulu kubangela leli phutha le-BSOD, ngakho-ke ngaphambi kokufaka ezinye izixazululo qiniseka ukuthi wonke amashayeli afakiwe abuyekezwa futhi asebenza kahle ngenguqulo yamanje yewindows.
Cindezela u-Win + R, thayipha ngobe.msc bese ushaya ukhiye wokungena ukuvula umphathi wedivayisi. Uma uthola ifayela le- Idivayisi engaziwa noma lowo onophawu lokumemeza oluphuzi lapho kufanele ubuyekeze ngokushesha umshayeli. Noma ungafaka futhi izibuyekezo ngqo kusuka kusayithi lomkhiqizi.
Futhi Ngokukhethekile Nweba Ama-Adapter Wokubonisa -> Qhafaza Kwesokudla Kumshayeli Wezithombe ezifakiwe bese Okokuqala uzame ukuvuselela iDrayivu. Uma imiphumela Isivele isibuyekezo sakamuva sifakiwe bese uchofoza kwesokudla futhi kumshayeli wehluzo ofakiwe bese ukhetha ukukhipha. Ngemuva kokukhubaza isici sokuqalisa esisheshayo (sabasebenzisi beWindows 10) Lungisa amafayela wohlelo owonakele, hlola bese ulungisa amaphutha wedrayivu yedrayivu ngokulandela izinyathelo ezixakile bese uqala kabusha amawindi ngokujwayelekile.
itunes ayisebenzi ku-pc
Khubaza Isici sokuqalisa esisheshayo
Lesi sinyathelo sisebenza ikakhulukazi kubasebenzisi beWindows 10. ukuvalwa kwe-hybrid (Isici sokuqalisa esisheshayo) kungezwe ukwenza amawindi asheshe kepha kwabanye, lesi sici sidala izinkinga ezahlukahlukene. Abanye abasebenzisi beWindows babika, Bayakwazi ukulungisa amaphutha ahlukene okuQala, Amaphutha wesikrini esiBlue ngemuva kokuthi Khubaza Isici sokuqalisa esisheshayo.
Ukukhubaza isici sokuqalisa esisheshayo sephaneli yokulawula evulekile -> izinketho zamandla (Ukubuka kwesithonjana esincane) -> Khetha ukuthi izinkinobho zamandla zenzani -> chofoza ku-Shintsha Amasethingi Angatholakali Njengamanje. Bese Lapha ngaphansi Kwamasethingi Wokuvala Susa ukumaka inketho Vula Ukuqalisa Okusheshayo (Kunconyiwe) Chofoza Gcina Izinguquko.
Lungisa amafayela wesistimu okonakele
Futhi, amanye ama-Times onakalise Amafayela wesistimu Abangela Amaphutha Ahlukile Wokuqalisa ukufaka APC_INDEX_MISMATCH Ikhodi ye-BSOD Stop 0x00000001 . Ungaqalisa ithuluzi lokuhlola ifayili lohlelo ukuze uqinisekise noma ubuyisele amafayela wesistimu alahlekile.
Ukuqalisa Ithuluzi lokuhlola ifayela leSistimu cindezela inkinobho ye- I-Windows Key bese uthayipha cmd -> Qhafaza kwesokudla ku-cmd bese uqhafaza Qalisa njengoMphathi. Bese uthayipha umyalo sfc / scannow ewindini le-Command Prompt bese ucindezela Faka key ukusebenzisa lo myalo.
i-laptop ibhajwe ekuqaleni kwamawindi 10
Lokhu kuzoqala ukuskena amafayili esistimu alahlekile, okonakele, uma kutholakala noma iyiphi insiza iwabuyisela ngokuzenzakalela kusuka kufolda ekhethekile etholakala ku-% WinDir% System32 dllcache. linda kuze kube ngu-100% uqedele inqubo yokuskena ngemuva kwalokho Qala kabusha windows.
Qaphela: uma imiphumela yokuhlolwa kwefayela yohlelo ingakwazi ukulungisa amafayela wohlelo owonakele, lapho-ke sebenzisa Ithuluzi le-DISM elungisa isithombe sesistimu futhi ivumele ukusetshenziswa kwe-SFC ukwenza umsebenzi wayo.
Bheka iDisk Disk Corruption
Amaphutha eDiski Drayivu, Imikhakha Yombhede nayo idala izinkinga ezahlukahlukene zokuqalisa, amawindi awabhuli, aqale kabusha kaningi ngamaphutha ahlukile e-BSOD. Sincoma Ukuhlola nokulungisa amaphutha wedrayivu yediski usebenzisa Umyalo we-CHKDSK Umbuso.
Vula i-Command Prompt njengomphathi, Bese uthayipha i-chkdsk C: / r / f / x bese ushaya ukhiye wokungena. Cindezela u-Y bese uqala kabusha amawindi.
windows 10 qala imenyu ukulungisa iphutha elibucayi
Qaphela: I-Chkdsk yediski lokuhlola idiski, C: ukubhekwa kwencwadi yokushayela ukuthola amaphutha, / r Ithola imikhakha emibi futhi ibuyise imininingwane efundekayo. / f Ilungisa amaphutha kudiski naku / x Iphoqa ivolumu ukuthi yehle kuqala, uma kunesidingo.
Ngemuva kokuqeda 100% inqubo yokuskena isistimu izoziqala kabusha futhi iqale ngokujwayelekile.
Thuthukisa Futhi uhlole ukutheleleka ngegciwane
Lapho iWindows Start ngokujwayelekile sincoma ukuhlola ukutheleleka ngegciwane kanye ne-malware ngokufaka ifayela le- i-antivirus enhle , i-anti-malware application enezibuyekezo zakamuva futhi yenza ukuskena okugcwele kohlelo.
Futhi faka ithuluzi le-Free System optimizer njengeCcleaner ukuhlanza i-junk, i-cache, amakhukhi, amafayela wephutha lesistimu njll futhi ulungise amaphutha weRegistry ahlukile.
Ngaso sonke isikhathi Gwema ukufaka Izicelo zamahhala eziqhekekile, ezincishisiwe. Njalo hlola futhi uskene ukutheleleka ngegciwane le-malware bese usebenzisa ithuluzi lokwenza ngcono. Ukuqalisa amawindi abushelelezi nokugwema izinkinga ezihlukile.
Lezi ezinye zezixazululo ezisebenza kakhulu okufanele zilungiswe APC_INDEX_MISMATCH YEKA 0x00000001 blue screen kumawindi computer. Unanoma yimuphi umbuzo, Iziphakamiso Zikhululeke ukuxoxa ngamazwana angezansi.
Lungisa Futhi Ulungise Windows 10 Izinkinga Zokuqalisa
Ungayilungisa kanjani Windows 10 I-Laptop Freezes and Crash Issues o
Windows 10 Qala Imenyu Ayisebenzi? Nazi izixazululo ezi-5 zokuyilungisa
Lungisa i-Thread Stuck kuDrayivu Yedivayisi BSOD ku Windows 10
Lungisa “Inqubo Ebucayi Ifile” Misa Ikhodi 0x000000EF ku Windows 10
ayikwazanga ukukhipha isilondolozi se-dns resolution
yini amafasitela e-dism 10
I-google chrome ayisebenzi kumawindi 10
Isicelo se-radeon host simise ukusebenza windows 10
ungawulungisa kanjani umsindo ngemuva kokuvuselelwa kwewindows 10
shesha usb transfer windows 10